अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा पनि सेयर कारोबार बढ्नुको प्रमुख कारण लगानीकर्ताको मनोबल
२०७७ भदौ ३१ बुधबार १२:३९:००
काठमाडौं । पछिल्लो केही सातायता सेयर बजार लगातार बढिरहेको छ । बजार परिसूचक नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । बजार बढिरहे पनि नेप्सेको अनलाईन कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा आएको समस्याले गर्दा लगानीकर्ताले हैरानी भने व्यहोरिरहेका छन् । टीएमएसकै समस्याले गर्दा गत बहिबार भएको सेयर कारोबारको राफसाफ अझै हुन सकेको छैन ।
नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से टीएमएसमा समस्या आउनुमा एक-अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । टीएमएसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले दुवै संस्थालाई राखेर तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दियो । यस्तै मंगलबार अर्थ मन्त्रालयको टोली नेप्से कार्यालयमै पुगेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दियो ।
कोभिड १९ ले अर्थतन्त्र शिथिल छ । तर अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको सेयर बजार भने लगातार बढिरहेको छ । अहिलेको बेलामा बजार बढ्ने कारण के हुन सक्छ त ? यस्तो परिस्थितिमा पनि बजार बढ्नुलाई सेयर बजारका विश्लेषकले भने नेपालको बजार ‘इकोनोमिक फन्डामेन्टल’ भन्दा पनि अन्य कारणले चलेको बताउँछन् ।
तर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढङ्गाना भने सेयर बजार बढ्नुमा बाह्य कारण नरहेको दाबी गर्छन् । अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा व्यापार व्यवसायलगायत अन्य लगानीको क्षेत्र नभएको र एकमात्रै लगानीको विकल्प पुँजीबजार हुँदा बजारमा उत्साह देखिएको उनको दाबी छ । कतिपयले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा कर्जाको माग नभएको र बैंकहरूमा अधिक तरलता हुँदा कर्जाको ब्याजदर घटेको तथा सेयर बजारमा लगानीको लागि पुँजी उपलब्ध भएकाले पनि प्रतिकूल अवस्थामा पनि सेयर बजार बढेको बताउँछन् ।
यस्तो परिस्थितिमा पनि सेयर बजारमा उत्साह देखिनुको कारणबारे सेयर बजारका विज्ञ डा. गोपाल भट्ट र बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गानाको बुझाइ जस्ताको त्यस्तै ।
नेपालको पुँजीबजार बजार इकोनोमिक फन्डामेन्टलभन्दा अन्य कारणले बढी चल्ने गरेको छ । नेपालको पुँजीबजारलाई आर्थिक भन्दा राजनीतिक फ्याक्टरले बढी प्रभाव पार्ने गरेको छ । हाम्रोमा सेयर बजारमा समस्या भयो भनेर लगानीकर्ता सीधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छन् । लगानीकर्ताहरूले संगठन बनाएका छन् । लगानीकर्ताको लगानी भनेको व्यक्तिगत हो । विश्वमा कही पनि लगानकिर्ताको संगठन हुँदैन, जुन नेपालमा छ ।
हामी निक्षेकर्ताहरूको अथवा लगानीर्ताहरूको फलानो अध्यक्ष, फलानो उपाध्यक्ष र फलानो सदस्य भनेर संगठन बनाउँछौं । बजारमा अगाडि जाँदा कुनै बैंकले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो व्यक्तिगत गोपनीयताजस्ता कुरामा विश्वासनीयताको कुरा आउँछ । खुला बजार अर्थतन्तमा यसरी चल्छ ?
लगानीकर्ताहरूको फोरम छ र उनीहरू माग पूरा भएन भने प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्छन् । यसले नेपालको पुँजीबजार आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक कारणबाट बढी प्रभावित हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
कसैले पनि तुरुन्तैको प्रतिफलका लागि लगानी गर्दैन । लगानी भविष्यलाई हेरेर गरिन्छ । अहिले बजारमा शिथिलता भए पनि भोलिका दिनमा नेपालको पुँजीबजारको भविषय राम्रो छ । अहिले कम्पनीहरूले रिर्टन दिन नसके पनि भोलिको दिनमा दिनसक्छन भनेर अहिले कारोबार भएका बेलामा र कम मूल्य भएको बेलामा किनौं भोलिको दिनमा राम्रो हुन्छ भनेर अहिले लगानीकर्ता आशावादी बनेको हुन सक्छन् ।
सधैं अहिलेकै अवस्था रहँदैन । लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई बाधक बताउँदै आएका थिए । उनले पनि राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ । सेयर बजारलाई अनुत्पादक भन्ने अर्थमन्त्री गए । अब आउने अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि उनको जस्तो नीतिगत गल्ती दोहोर्याउँदैन होला । अब जो आए पनि पुँजीबजारलाई पोजेटिभ रुपमा हेर्ने अर्थमन्त्री नै आउँछन । त्यस्तो बेलामा पुँजीबजार अझै उचालिन सक्छ । भोलिका दिनमा अझै मूल्य बढ्न सक्छ भनेर अहिले लगानीकर्ता आशावादी भएको र मनोबल बढाएको जस्तो लाग्छ ।
त्यतिमात्रै नभएर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुनसक्छ । अब बजारमा स्मार्ट इन्भेस्टरको प्रवेश भइसककेको छ । स्मार्ट इन्भेस्टरले योजना बनाएर लगानी गर्छ । आन्दोलन गर्ने संगठन बनाउने भनेको पहिलेको जस्तो इन्भेस्टर होइन अब यो क्षेत्रका लागि स्मार्ट हुन् ।
पढेलेखेका, पैसावालादेखि लिएर अनशन बस्छु भन्नेसम्मका लगानीकर्ता पुँजीबजरमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई तर्साउँछु भन्ने लगानीकर्ता त स्मार्ट लगानीकर्ता हुन् नि । लगानीकर्ताको यस्तो समूहले बजारमा सोझा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पारेको छ । यस्ता लगानीकर्ता केही कारोबार बढाएर सुचक बढाउँदै लैजाने गर्छन् । जसले साधारण इन्भेस्टरको मनोबल बढ्छ, उनीहरूले पनि अब बजार बढ्यो भनेर लगानी बढाउँछन् । यस्तै बेला स्मार्ट इन्भेस्टरले भने सर्ट ट्रम नाफा बुक गर्दै अगाडि बढ्छन् ।
नेप्से १८०० पुग्दा किनेकाहरूलाई धेरै घाटा भएको छ । बजार अलिअलि भए पनि बढ्दै जाँदा थोरै नाफा गरेर बजार बढाउँदै लैजाँदा त्यो उठाउन सकियोस् भन्‍ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ । यो भनेको सामान्य लगानीकर्तालाई स्मार्ट लगानीकर्ताले मूर्ख बनाउने पनि हो । बजारमा त्यस प्रकारका तत्त्व हुन्छन् नै । बजारमा दुवै प्रकारका स्मार्ट र ‘इनइफिसिएन्स’ लगानीकर्ताहरू हुन्छन् ।
जति नै इफिसियन्स भए पनि केही न केही मानिसहरूको मनोविज्ञान इनइफिसियन्सले भरिएकै हुन्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताले साधारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउनु मार्केट मेकानिजमको अर्को खुबी हो । त्यस्ता स्मार्ट, पढेलेखेका, जान्‍ने बुझ्‍ने (ब्रोकर, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री) लाई समेत तह लगाउने लगानीकर्ता बजारमा आइसकेका छन् । त्यस्ता लगानीकर्ताले बजारमा दबदबा सिर्जना गरेको पनि हुनसक्छ । मेलै हेर्दा बजारमा त्यस्तै पनि देखिन्छ । उनीहरूको भर्सन सुन्दा पनि त्यस्तै लाग्छ ।
सेयर बजार भनेको जोखिम लिनेहरूको हो । सेयर बजार लगानीकर्ताको जोखिम बहन गर्ने क्षमता र मनोबल उच्च हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । उनीहरू यस्तो बेलामा पनि उच्च जोखिम लिन तयार छन् र उनीहरूको मनोबल पनि उच्च छ । अहिले जस्तो परिस्थिति भए पनि उनीहरू भविष्यप्रति पूर्ण रुपमा आशावादी भएका देखिन्छन् । त्यसका लागि आर्थिकभन्दा गैरआर्थिक आधारहरू लगानीकर्ताले पाएको जस्तो लाग्छ । अहिलेको सेयर बजारलाई हेर्दा अवस्था त्यही देखिन्छ ।
अहिले बजारमा देखिएको उत्साहलाई सेयर बजारमा भएको सुधारको प्रतिफलका रुपमा लिनुपर्छ । सिस्टममा केही समस्या भए पनि बजार राम्रोसँग ‘फङ्सन’ भएको छ । कुनै अवरोध भएको अवस्था छैन । लगानीकर्ताहरूको मनोबल बलियो बनेको अवस्था छ । जसले गर्दा सेयर बजार बढेको हो ।
अहिले बजारमा भएको कारोबार संख्या हेर्दा लकडाउन अगाडिको हाराहारीमै छ । तर पहिले अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या सीमित थियो भने अहिले त्यस्तो ह्रवात्तै बढेको छ । अल्पकालीन लगानीकर्ताको प्रवेशले बजार बढेको भने होइन ।
अहिले सबै आर्थिक गतिविधि बन्द भएको अवस्थामा लगानीकर्ता तथा व्यापार व्यवसाय गर्नेले अवसर खोजेको अवस्था छ । यो अवसर अहिले पुँजीबजारमा छ । जसले कारोबार रकम र बजार परिसूचक बढेको हो । बजार सामान्य अथवा प्रतिकूल जुनसुकै अवस्थामा पनि करेक्सन हुन्छ । तर वियरिस ट्रेन्डमा पहिलेकै अवस्थामा फकर्ने कारण तथा अवस्था भने अहिले रहेको छैन ।
यता, अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति भए । खतिवडाले राजिनामा दिए पनि आफै्ले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले उनै खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लााहकार नियुक्त गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने जानकार बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रायको जिम्मा आफूले लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई सँगै राखेर निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको थिए । छलफलमा सहभागी भएका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले विषेश आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्नु र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राख्नुलाई कतै अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थमन्त्रालयको कामकाज खतिवडाले नै बालुवाटारबाट सञ्चालन गर्ने तयारी त होइन भन्ने प्रश्‍न उब्जिएको छ ।
खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएसँगै सेयर बजारका लगानीकर्ताले नरुचाएको भन्ने आरोप खेप्दै आएको खतिवडा पुनः अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहने अवस्था बनाइएको छ । यसले कतै सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल पुनः निराशामा बदलिने त हैन भन्‍ने आशंका भने उत्पन्न भएको एक लगानीकर्ताले बताए ।